Ubuningi obuphezulu obuphephile futhi obunokwethenjelwa - i-NBC Electronic Technologic Co, Ltd.
I-laboratory ezimele, idivayisi yokuhlola esezingeni eliphakeme, thola i-UL, i-CUL ect. Isitifiketi se-EU.
Letha ukulawulwa kwekhwalithi ekwakhiweni lapho sithuthukisa imikhiqizo, inqubo yokulawula, ukuhlomisa idivayisi yokuhlola esezingeni eliphakeme namasu wokulawula, okwamanje ngenisa esikhungweni sesithathu sokuhlola ukuze kuqinisekiswe, kuqinisekiswe ikhwalithi yomkhiqizo. Njalo ekuqondeni kwamakhasimende, qinisa ukuxhumana nekhasimende, ukuze wazi isidingo sabo sokuhlinzeka ngezinsizakalo ezihamba phambili, imishini yokuhlola ephelele ngokuqhubekayo, ukuthuthukisa ikhono lokulawula ikhwalithi, ukwenza ngcono ukwaneliseka kwamakhasimende, ukukhonza amakhasimende, ukufeza ukusebenzisana kwesikhathi eside & win-win nekhasimende.
Factory kudlule ISO9001, ISO14001.
Thembela eqenjini le-QC, uphelelise ukuphathwa kwangaphakathi kwemboni njalo, usebenzise i-SOP, ucubungule, wenze lula, i-systematize, ukuthuthukisa ukusebenza kahle, ukunciphisa ubungozi bokusebenza kwabasebenzi, umshuwalense ukulawulwa kwekhwalithi yemikhiqizo. Hlanganisa nenkampani yocwaningo lwangaphakathi / lwangaphandle, nokwenza ngcono, ukwenza ngcono njalo.
Hlakulela umugqa wokukhiqizwa kwemvamisa eguquguqukayo, sebenzisa umugqa wokukhiqiza we-automation Assembly, wethule uhlelo lwe-ERP
Ukuze uthuthukise ukuzinza kwekhwalithi nokusebenza kahle kokukhiqiza, sebenzisa ukuhlangana okuzenzakalelayo, ukusebenza kwe-E, ukuthuthukisa ukusebenza komsebenzi, unikeze isixazululo sokuncintisana kumakhasimende.